Kalfadhiga golaha wakiillada Puntland oo la filayay inuu soo xirmo oo furnaan doona, waxayna galeen fasax bil ah – Kalfadhi
Kalfadhiga golaha wakiillada Puntland oo la filayay inuu soo xirmo oo furnaan doona, waxayna galeen fasax bil ah
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta galay fasax bil ah, waxayna dib shaqada ugu noqon doonaan 20ka Maarso, si ay uga shaqeeyaan una meelmariyaan miisaaniyadda cusub ee dowladda dabadeedna ay fasaxoodii caadiga ahaa u galaan.
Gudoomiyaha golaha wakiillada Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa shaaciyay fasaxa bisha ah ee ay gelayaan xildhibaanada iyo xataa guddiyada joogtada ah ee golaha wakiilladu.
“Marka la gaaro 1da Abriil dalku miisaaniyad ma leh, sidaas darteed waa in aan 10ka cisho ee ka horeeya mudadaas aan si adag u shaqaynaa,” ayuu yiri Gudoomiye Dhoobo-daareed.
Gudoomiyaha golaha wakiilladu wuxuu sheegay in shaqooyinkii golaha horyaalay kalfadhigan ay si wanaagsan u qabsoomeen oo aysan hawli u harin. Waxaa la filayay in kalfadhigu soo xirmo toddobaadkan.
Baarlamanka Puntland ayaa sanadkii yeesha laba kalfadhi oo caadi ah oo midkiiba uu socdo 45 cisho, waxayna fadhiyadaas furmaan bilaha Juun iyo Oktoobar.
Intii kalfadhigu socday Baarlamankan ayaa ansixiyay miisaaniyad deg deg ah oo saddex bilood ah oo ku eg 31da Maarso si xukuumadu u sii shaqayso. Waxaa baaqday kalfadhigii Oktoobar ee sanadkii hore uu baarlamanku yeelan lahaa sababo la xiriira doorashada, taasna waxay meesha ka saartay in la meelmariyo miisaaniyadii sanadkan xukuumadu ku shaqayn lahayd, maadama inta badan kalfadhiga Oktobar uu yahay kan lagu meelmariyo arrinta miisaaniyadda.
Kulanka maanta ayaa ajandihiisu ahaa warbixin sanadeedkii 2018 ee arrimaha Xuquuqda Aadanaha waxayna ka dhegaysteen difaacaha Xuquuqda Aadanaha Puntland Maxamed Yusuf Cali, iyagoo su’aalo kulul dhinaca xaaladaha xuquuqda Aadanaha ka weydiiyay difaacaha.